Fanatsarana ny varotra: fanidiana ny banga eo anelanelan'ny varotra sy ny marketing
Alatsinainy Martsa 4, 2013 Talata, Martsa 5, 2013 Jenn Lisak Golding
Ny lohahevitry ny manova ny fantsom-pivarotana ao an-tsain'ny orinasa rehetra. Ny ampahany lehibe amin'ny fanovana dia ny fomba fahitantsika ny varotra, ary ny tena zava-dehibe, ny fomba fampifanarahana kokoa ny paikadin'ny varotra sy ny marketing noho ny hatramin'izay. Ny fikambanana dia mila mamakafaka ny fomba hanatonan'ny fikambananany ny varotra tsy miova mba tsy hahavery azy ireo. Milamina ve ny tetezamita manomboka amin'ny marketing ka hatrany amin'ny varotra? Moa ve manome fampahalalana ampy amin'ny andaniny roa ianao? Mikendry ny vinavina mety ve ianao? Ireo no fanontaniana tokony apetrakao matetika.
Ny enablement mivarotra, raha ny hevitro, dia mampivondrona ireo ekipa roa (varotra sy marketing). Izy io dia mamorona fifandraisana symbiotika, izay miankina amin'ny iray ny fahombiazan'ny iray ary ny mifamadika amin'izany. Vokatr'izany, ireo ekipa ireo dia nanjary nihanatanjaka kokoa ary mamorona onjam-piasa hanamorana ny fizarana tanana sy hitazonana ny mpanjifa.
Ny mpanjifanay ao amin'ny TinderBox dia niara-niasa tamin'ny fikambanana isan-karazany amin'ny alàlan'ny fanomezana mpanjifa azy rindrambaiko fitantanana ny tolo-bidy. Ny tolo-kevitry ny varotra dia ampahany manandanja amin'ny fizotry ny varotra, saingy eken'izy ireo ihany koa fa ny fifandraisana alohan'ny hahatongavan'ny mpivarotra amin'ny sehatry ny tolo-kevitra dia manome endrika ny fifandraisana hirosoana. Ny tena fihainoana ny mpanjifa sy ny fanangonana angona avy amin'ny marketing dia hanampy anao tsy hiditra amin'ny dingana fanolorana soso-kevitra fotsiny, fa hanampy anao hamorona tolo-kevitra haino aman-jery manankarena izay manintona ny filàn'io fanantenana io.
Niara-niasa tamin'ny ekipa tao amin'ny TinderBox izahay mba hanao fikarohana manodidina ny fahazoana mivarotra ary ny fanovana izany dia manova ny lalao. Miaina ny sasany amin'ireo fanaintainana mivarotra ireo ve ianao? Inona no fanovana ataonao ao amin'ny fikambanananao hampifanarahana ny varotra sy ny varotra?
Tags: fifandraisana-barotraFanamafisana ny varotraTolo-kevitra momba ny varotra